रोचक खबर – Asal Kura
दाँतको बिचमा अन्तर भएका मानिसहरु सुन्दरताको दृष्टिकोणमा राम्रो मानिदैन तर समुद्रशास्त्रको अनुसार यस्तो मान्छे भाग्यशाली हुन्छ। दाँतको बिचमा अन्तर भएका मानिसहरु सुन्दरताको दृष्टिकोणमा राम्रो मानिदैन तर समुद्रशास्त्रको अनुसार यस्तो मान्छे भाग्यशाली हुन्छ। यस्ता व्यक्तिहरूमा यी विशेषताहरू हुन्छन्: १. दाँतहरु बीचको...
ज्योतिषशास्त्रले मानिसको कयौँ रहस्य खोलिदिने गर्छ। यस विद्या मार्फत हामीले मानिसको गुण, दोष र यसको व्यक्तित्वका बारेमा पत्ता लगाउन सक्छौँ । आज हामी तपाईलाई केही राशिका बारेमा जानकारी दिदैछौँ । जो निकै रिसाह हुने गर्छनु। जानौँ कुन कुन हुन् ती...
मायाँ गर्नेलाई धेरै माया गर्ने र घृणा गर्नेलाई धेरै घृणा गर्ने सलमान खानको बानि नै हो। आफूलाई मन नपरेको व्यक्तिको खेदो खन्न समेत पछि नपर्ने सलमान मनले खाएको व्यक्तिको लागि भने ज्यानै दिन पनि पछि पर्दैनन् । बलिउडमा लामो समय...
यी राशीका मानिसहरुको जोडि मिल्यो भने निकै प्रगाढ प्रेम हुन्छ
राशी अनुसार प्रत्येक व्यक्तिको स्वभाव फरक फरक हुने गर्दछ। ज्योतिषशास्त्रका अनुसार प्रेम सम्बन्धमा तपाईको पार्टनरको राशि कुन भन्ने बारे खास ध्यान राख्नु पर्दछ। यदी पार्टनरको राशि तपाईको राशिसँग मिल्छ भने तपाईको प्रेम सम्बन्ध निकै राम्रो हुने गर्दछ। यी राशीका मानिसहरुको...
नायक साहरुख खानको मुख्य भूमिका रहेको चलचित्र ‘पठान’मा अर्का नायक सलमान खानको केमियो भूमिका छ । यो चलचित्रका लागि सलमानले १० दिन यशराज स्टूडियोमा छायांकन समेत गरेका थिए । तर, भारतमा कोरोनाको संक्रमण ह्वात्तै बढेपछि चलचित्रको छायांकन रोकिएको छ ।...
इतिहासमै पहिलोपल्ट जन्मियो ३ लिङ्गी बालक यस्तो अचम्म
मध्यपूर्वी मुलुक इराकमा हालै मानव इतिहासकै पहिलो र अनौठो घटना भएको छ । त्यहाँ तीनवटा यौनाङ्ग भएको बच्चा जन्मिएको छ । इराकको मोसुल शहरमा अनौठो शारीरिक विकृतिसहितको बच्चा जन्मिएको हो। उक्त बच्चाको शरीरमा तीनवटा लिङ्ग भएको पाइएको छ । स्थानीय...
बिहानै उठेर गर्नुहोस् यस्ता कार्य : जसले दिनमात्र होइन भाग्य पनि चम्कन्छ
तपाई बिहान उठेर केके गर्नुहुन्छ ? यस्ता कामहरु गर्नुभएको छैन भने अब देखि बिहान बिहान यस्ता कार्यहरु गर्नुहोस् । तपाईको घरमा कहिल्यै पैसाको कमी हुनेछैन । भाग्य चम्किने छ । घरमा सुख समृद्धि बनाइराख्नको लागि हाम्रा पूर्वजहरुले पहिलेदेखी नै धेरै...